Carboxymethyl Vanonyanya kudya
Vashandi kuchengetwa & Homecare kushanda
Textile Printing Chikumbiro
Paper Making Chikumbiro
Penda & bemhapemha
Other maindasitiri Chikumbiro
Company Brief sumo
Unionchem ari nyanzvi pakuburitswa uye rokutengesa yepamusoro dzakagadzirirwa makemikari. chigadzirwa Our rinotaura zvakawanda hydrocolloids kuti dzakafara mafomu zvinosanganisira zvokudya, zvizorwa, vashandi hanya, mhuri kuchenesa, Whitehead Textile, bepa kugadzira, zvedongo, pendi & unhani, oilfield, migodhi, etc. Mumwe chigadzirwa muridzi zvakaisvonaka uye rakasiyana functionality mu thickening, kuturika, rheology kuzvidzora, flocculation, etc fomu kwayo yoga.
Tiri vakazvipira kugadzira uye kupa yepamusoro uye zvakatipoteredza ushamwari zvigadzirwa. Kurimwa ari kuongororwa pamwe ISO9001 yepamusoro utariri system.Quality iri zvachose dzinodzorwa kubva mbishi mashoko okupedzisira product.Production magadzirirwo uye chivako vari kuzosangana mureza dzakawanda uye unhu rokuongorora uye kutonga lab.equipped pamusoro kugadzirwa nzvimbo. unhu The chigadzirwa uye basa vari zvakanaka aifarirwa vatengi kunze.
We kuronga yakavimbika uye kunokurumidza chokufambisa & hurukuro kune vatengi vedu. Product vakachengetedzwa kudzivirirwa zvakakodzera unhu packing.We chengeta mumatanda kuti zvakasiyana siyana vedu yokuchengetera zvinhu yedu nechokwadi yakakodzera uye njodzi pakusununguka.
chikwata chedu ruzivo vanogona kushanda pamwe vatengi dzakananga chikumbiro chavo kana Specification zvazviri uye zvekuti customized chigadzirwa ne mufananidzo uye data, zvinobudirira kushumira vatengi vedu chigadzirwa abvume.
Nokuzvitsaurira zvizere pamusoro zvinhu zvedu, tiri zvichiita kuti vakawanda nyanzvi mugadziri uye mutengesi ari high quality, mutengo inoshanda uye nenguva pakusununguka.
Water Treatment, Condiments Soy Sauce, Screen Printing Paste, Corrugation Starch Gum Powder, Oilfield Chemical , Leakoff Control,